नेविगेशन मुख्य सपनाहरु फैशन स्वास्थ्य Recipes युक्तिहरु चिन्हहरू 12>> श्रेणी बाँकी Thyme - Contra यो वनस्पति पकवान एक विशेष स्वाद र एक सुखद स्वाद दिन खाना पकाउने मा प्रयोग गरिन्छ। तर, Thyme उपयोगी गुण मा उपस्थिति औषधी मा यसको प्रयोग गर्न अनुमति दिने। हाम्रो पुर्खाहरूको विभिन्न रोगबाट मदत संग उपचार गरियो। तर, कुनै पनि औषधि संग रूपमा यस लेखमा पछि वर्णन गरिनेछ जो Contra-thyme, छ। Thyme - प्रयोग र contraindications निम्नानुसार बिरुवाहरु को प्रयोग हो: thyme को प्रयोग निराशा हटाउनु मदद गर्दछ, स्नायु तनाव। यो बिरुवा व्यापक मस्तिष्क रोग र concussions लड्न प्रयोग गरिन्छ। Thyme को पेट को रोग संग copes, सुनिंनु हटाउन र spasms लाइ रोक्छ। विरोधी-भडकाऊ सम्पत्ति यो सम्भव चोटपटक र घाउ लागि बोट प्रयोग गर्न बनाउँछ। analgesic गुण मार्फत thyme संग स्नान को नियमित सेवन पेशी rheumatism हटाउन मदत गर्छ। बिरुवा thyme केही contraindications छ। : यो यसलाई प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ
Puffs हलवे हामी कोठा लागि फर्नीचर किन्न सुरु गर्दा हामी, सुरुमा मा विचार के?
फर्सी तेल फर्सी बीउ तेल चांद बीउ देखि बनाएको छ। यो केही कस्मेटिक कमीकमजोरी सुधार गर्न मदत भनेर उपयोगी गुण को एक नम्बर छ। तर कद्दू बीउ तेल कस्मेटिक्स मा, तर पनि औषधी मा मात्र प्रयोग गरिन्छ: यो उपकरण एक purgative र anthelmintic जोखिम छ ।
यो तेल चिसो बढ्न, यसरी संरक्षण पोषक प्राप्त र शरीर मा यसको प्रभाव को दक्षता सुधार छ। यो कस्मेटिक समस्या सुलझाने लागि बाह्य केही अङ्गहरू र प्रणाली, साथै स्थापना गर्न orally लगिन्छ। peculiar खैरो वा गाढा हरियो रंग, र यो एक सानो तीता दिन्छ र स्वाद उपस्थिति तेल। चांद तेल को स्वाद अक्सर सलाद लागि खाना पकाउने मा प्रयोग गरिन्छ किनभने। चांद तेल को संरचना यो प्राकृतिक उत्पादन धेरै उपयोगी पदार्थ समावेश: प्रोटिन;
प्रकार स्नान यसको अद्यावधिक बाथरूम साक्षी धेरै खुसी सबै सजावटी सजावट को मरम्मत र पूरा गरेपछि। तर यो अभ्यास मा धेरै सुन्दर उपस्थिति बाथटब आफ्नो आशा सफाइ गर्दैन हुन्छ। आज बजार यति "आफ्नो" हुँदैन को चयन संग हतार, हामीलाई स्नान विभिन्न प्रकार को एक विशाल चयन प्रदान गर्दछ। यस प्रकार र स्नान को आकार स्नान को प्रकार धेरै मैदान मा लगभग छन्: फारम (परम्परागत कुना) मा ;
संसारमा सबै भन्दा बडा मेट्रो megacities मा महानगरीय सार्वजनिक परिवहन को मुख्य रुप हो। लाख धेरै मान्छे को एक जनसंख्या संग धेरै ठूलो शहर, यसको आफ्नै मेट्रो सिस्टम छ, यात्रु को यातायात को कार्यान्वयन मा एक विशाल तनाव शुरू भएको छ। यो यो महानगरबारे भूमिगत भागहरु को लाइन मा एक ठूलो अंश जो को सहरको भूमिगत, थिएन भने, सडक को पहिले नै कठिन परिस्थिति जटिल थियो कसरी कल्पना गर्न कठिन छ। गरेको संसारको सबैभन्दा ठूलो भूमिगत छ, र केही पनि यस क्षेत्रमा एउटा रेकर्ड सेट कुन शहर मा बाहिर आंकडा प्रयास गरौं। संसारको मा सबैभन्दा लामो दुरीको मेट्रो न्यूयोर्क मेट्रो संसारमा सबैभन्दा विस्तार मेट्रो - न्यूयोर्क शहर मेट्रो। के न्यूयोर्क मेट्रो बनाउँछ, र रेकर्ड को गिनीज बुक मा मिल्यो। यसको कुल लम्बाइ भन्दा बढी 1355 मी छ, र यात्री यातायात 1056 मी को कुल लम्बाइ को लाइनहरु मा लगे छ, बाँकी बाटो प्राविधिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिन्छ। 26 हवाई स्थित ठूलो शहर आज 468 मेट्रो स्टेशन,। यो न्यूयोर्क मेट्रो को लाइन नाम र मार्गहरू संख्या र पत्र द्वारा denoted छन्।5लाख यात्रु - तथ्याङ्कहरू अनुसार, संसारको सबैभन्दा लामो दुरीको मेट्रो हरेक दिन 4.
जीवनी Reese Witherspoon लौरा जेन Reese Witherspoon डाक्टर को एक परिवार मा नेशविल 22 marta1976 को शहर मा जन्म भएको थियो। एक बच्चा रूपमा, त्यो एक डाक्टर बन्न चाहन्छु भविष्यमा आमाबाबुको अनुकरण गर्न चाहन्थे। स्क्रिनमा पहिलो पटक, Reese सात वर्ष मा देखा - यो व्यापारिक मा। स्कूल मा, Witherspoon, त्यो स्कूल थिएटर मा खेल, कलात्मक व्यायाम मा लगी थियो, धेरै बहुमुखी बच्चा थियो टीम प्रशंसक को कप्तान थियो, राम्रो अध्ययन गर्दा एक मोडेल रूपमा moonlighted। अभिनेत्री को क्यारियर मा, त्यो स्कूल जवान प्रतिभा लागि प्रतियोगिता जीत पछि सोच्न थाले। क्यारियर 14 वर्ष मा, त्यो र उनको मित्र unconditionally फिलिम निर्देशक रबर्ट Mulligan Reese चलचित्र मा भूमिका अपनाए जहाँ ओडिशन, गए "को चन्द्रमा मा मान्छे।" फिल्म मा अभिनेत्री भूमिकाहरूको इच्छुक त्यसपछि पछि प्रस्ताव र "बालुवा मा लिया" "जैक को भालु।" 1994 मा, Witherspoon चाँडै किनभने लगातार फिलिम को फेंकता जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, गर्न स्वीकारे। आफ्नो क्यारियर को धेरै सुरुदेखि, Reese Witherspoon उनको भूमिका प्रत्येक चाहन्थे अभिनेत्री विशेष थियो र नयाँ कुरा यो संग ल्याए। त्यो, "म तिमीलाई अन्तिम गर्मी के थाहा" त्यो यस्तो चित्रहरु मा शूटिंग रूपमा, चासो लाग्न गरेनन् भनेर सुझाव अलग ब्रश किन कि "चिच्याउनु," "शहरी Legends", "रोमियो र जूलियट" हो। Reese लागि पहिचान 1998 मा कमेडी "Pleasantville" मा एक शानदार खेल पछि आए। एक वर्ष पछि, त्यो फेरि, यसको सितारा स्थिति पुष्टि उनको प्रेमी रयान फिलिप संग चलचित्र मा "क्रूर मनसाय" खेलेको। 1999 मा, Reese र रयान विवाह, र एक समय पछि खुसी आमाबाबुले, एक सुन्दर केटी Ava एलिजाबेथ भए। लगभग तुरुन्तै जन्म अभिनेत्री वी श्रृंखला मा अभिनय सुरु भएपछि "मित्र।" 2001 मा, Reese Witherspoon के वास्तविक ख्याति सिकेका जो पछि तस्वीर "कानुनी तवरमा गोरा", बाहिर स्क्रीन। यो फिल्म भूमिका नाटकीय हलिउड मा प्रतिभाशाली Actresses को शेयर वृद्धि जो एक शानदार सफलता, ल्याए। यस्तो "मीठो घर अलबामा," "जा व्यग्र को रेखा हिंड्नेछौं" र "को महत्व" रूपमा थप भूमिकाहरूको पनि धेरै सफल थिए। वर्तमान मा, Reese Witherspoon को लोकप्रियता जुलिया रॉबर्ट्स र निकोल Kidman जस्तै यस्तो फिलिम सितारा संग तुलना गर्न सकिन्छ। शैली Reese Witherspoon Reese Witherspoon जीवन शैली मा त्यो नयाँ फेसन रुझान र व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू बीच एक सन्तुलन प्रहार गर्न प्रयास, र क्लासिक रुचि, धेरै रूढिवादी छ। उनको सधैं सफल आउटफिट। त्यो शान्त टन र सख्त laconic शैली रुचि। पत्रिका अनुसार Reese Witherspoon "मानिसहरू" छोटो कपडे लगाउने सक्षम थियो। 2009 मा त्यो पनि यो पत्रिका देखि पुरस्कार "सर्वश्रेष्ठ छोटो कपडे" पाए। सुन्दर गोरा जस्तै चिरपरिचित ब्रान्डहरु देखि आउटफिट रुचि:। रोलाण्ड Mouret, नीना Ricci, l`Wren स्कट, Marchesa, Rodarte र ताइवान फैशन डिजाइनर जेसन वू कपाल र रहनसहन Reese Witherspoon यो उत्तिकै स्टाइलिश छ र organically कपालको ढांचा र रहनसहन Reese Witherspoon हेर्न। शैली को रातो कार्पेट शो अभिनेत्री सूक्ष्म अर्थमा मा सुन्दर देखा जो मूल स्टाइल,। उनको क्यारियर भर, त्यो अक्सर केश संग प्रयोग: braids, छोटो कपाल, फिर्ता एक topknot मा निकालयो, र विभिन्न स्टाइल। Hairstyles Reese Witherspoon कपालको ढांचा बीच undisputed मनपर्ने रंग मा एक सानो bang Blond संग एक मोडेल छ। नयाँ फिल्म गोली लागि अभिनेत्री "असल झूठ" छवि परिवर्तन थियो। अब आफ्नो घर मा सूडानी शरणार्थी प्राप्त जो एक गम्भीर र जिम्मेवार अमेरिकी, खेल Reese Witherspoon brunette। 37 छोटा गोरा केटी को उमेर मा देखिन्छ, त्यो एक छोडपत्र र पुन-विवाह एजेन्ट जिम Toth बाँचेका जो दुई छोराछोरी आमा थियो हुनत। तपाईं आकार मा आफ्नो आंकडा राख्न अनुमति दिन्छ जो सुन्दरता Reese Witherspoon को गोप्य, यो ठीक सन्तुलित आहार र इच्छा को एक ठूलो शक्ति संग संयुक्त शारीरिक गतिविधि छान्नुभएको छ। इस्टर लागि आवेदन 2013 मा इस्टर मई 5th मा पतन। तिनीहरूले यो उज्ज्वल दिन को तयारी संलग्न महसुस भनेर आमाहरू र हजुरआमा, केक, रंग, अन्डा, बेक पनीर पाक्नु, र भन्दा बच्चाहरु हुनेछ?